मे १३ तारिख देखी कोरियामा नयाँ नियम लागु हुँदै ! – Kantipur Press
मे १३ तारिख देखी कोरियामा नयाँ नियम लागु हुँदै !
अब दक्षिण कोरियामा इलेक्ट्रिक स्कुटर चलाउनका लागि लाइसेन्स चाहिने भएको छ। यहि बिहिवारबाट यस्ता स्कुटर चलाउने लाइसेन्स आवश्यक पर्नेछ।
कोरियामा लागू भइरहेको रोड ट्राफिक एक्टमा यहि मे १३ तारिखबाट यो नि’यम परिवर्तन भएसँगै अहिले इलेक्ट्रिक स्कुटर चलाइरहेका धेरैलाई अ’सर पर्ने देखिन्छ। कोरियामा अहिले धेरैले लाइसेन्स नभई यस्ता स्कुटर चलाउने गरेको पाइएको छ।
अब लाइसेन्स बिना इलेक्ट्रिक स्कुटर चलाएमा ज’रिवाना तिर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी उमेरका हिसावमा पनि नयाँ परिवर्तन भएको छ। यसअघि १३ बर्षभन्दा माथिकाले इलेक्ट्रिक स्कुटर चलाउने पाउने भएतापनि अब भने यस्तो स्कुटर चलाउन १६ बर्ष उमेर पार गरेको हुनुपर्नेछ।
प्र’हरीले मंगलबार दिएको जानकारी अनुसार विना लाइसेन्स इलेक्ट्रिक स्कुटर चलाएको पाइएमा १ लाख वनसम्म ज’रिवाना तिराइनेछ। यदि १६ बर्षभन्दा कम उमेरकाले यस्ता स्कुटर चलाएको पाइएमा उनिहरुका अभिभावकलाई ज’रिवाना तिराइनेछ।
त्यसैगरी मा’दक प’दार्थ सेवन गरी इलेक्ट्रिक स्कुटर चलाएमा १ लाखसम्म ज’रिवाना लाग्नेछ। यसअघिको नि’यममा यो अवस्थामा ३० हजार मात्र ज’रिवानाको व्यवस्था रहेको थियो। यदि मा’दक प’दार्थ सेवन गरेको संका लागि प्र’हरीले ब्रेथालाइजर चेक गर्न खोज्दा नमानेको खण्डमा उनिहरुलाई १ लाख ३० हजार सम्म ज’रिवाना लाग्नेछ। यसअघिको नि’यममा यो अवस्थामा १ लाख वनसम्म ज’रिवानाको व्यवस्था रहेको थियो।
मा’दक प’दार्थ सेवन गरी इलेक्ट्रिक स्कुटर चलाउने चालकको लाइसेन्स समेत सस्पेन्ड गरिनेछ। स्कुटर चलाउँदा टाउकको सु’रक्षा गर्ने हेलमेट नलगाएको खण्डमा २० हजार वन ज’रिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले कोरियामा इ स्कुटर भाडामा लगाउने कम्पनीहरुले समेत लाइसेन्स सहित साइन अप गर्नेहरुलाई विभिन्न किसिमका रिवार्डहरु दिन थालेका छन।
इ स्कुटरसँग सम्बन्धित दु’र्घट’नाहरु बढेपछि आमजनताबाट यसको रे’गुलेशन गर्न माग आएपछि गत डिसेम्बरमा राष्ट्रिय सभाले यस्तो नि’यम परिवर्तन गरेको थियो। तर यो नि’यम लागू भएको मितिबाट एक महिनासम्म क’डा रुपमा ज’रिवाना गर्नेभन्दा पनि चालकहरुलाई नयाँ नि’यमबारे बताउने तथा सु’रक्षाका उपायहरुको ज्ञान दिने कुरामा जोड गरिने बताइएको छ। त्यसैगरी इलेक्ट्रिक स्कुटरका लागि छुट्टै बाटोहरु अझ बढि बनाउने कुरा पनि बताइएको छ।
कोरियाबाट फर्केर गरे एक यूवाले नेपालमा तरकारी खेती,भन्छन सन्तुष्ट छु !
घरायसी कामका लागी विदेशी कामदार बोलाउने सोचमा दक्षिण कोरिया !